Sage na Libra 2 bụ Kobo eReaders ọhụrụ nwere Bluetooth | Akụkọ Ngwa
Sage na Libra 2 bụ Kobo ọhụrụ eReaders Bluetooth
Kobo (nke Rakuten) na-aga n'ihu ịkụ nzọ n'ahịa e-book, ebe anyị hụrụ mmetụta siri ike na uto ya, n'etiti ihe ndị ọzọ. ekele maka mwepụta Kobo Elipsa nke ọma, ngwakọ ngwakọ ngagharị nke ahịa ya karịrị ihe a tụrụ anya ya.
Mgbe ha mikpuru n'ime miri emi n'ime Kobo Elipsa, ụlọ ọrụ ahụ na -agba mbọ ka ọ megharịa ụdị ngwaahịa ya dị iche iche wee si otú a na -ewetara anyị ihe ọhụrụ Kobo Libra 2 the Kobo Sage, ngwaahịa abụọ nwere ndozi na ọkwa ngwaike yana na -eme mmemme ọbịbịa nke teknụzụ Bluetooth. Ka anyị lelee ihe ngosi Kobo ọhụrụ a.
1 Kobo Sage
2 Kobo Libra 2
Ngwa ọhụrụ Kobo na-afụ ụfụ 1200-inch E Ink Carta 8 na mkpebi nke na -enye njupụta nke pikselụ 300 n'otu inch. Nchekwa ahụ na -aga 32GB dị ịtụnanya (iji chekwaa maka ọrụ gị na ọdịnaya gị) na -agba ihe a niile site na processor 1,8 GHz. N'ụzọ dị otu a, ọ na -agbasa katalọgụ njikọ ya site na ịgbakwunye Bluetooth maka sistemụ akwụkwọ ọdịyo nke Kobo ga -ebido n'isi. Anyị na -ejigide mmiri IPX8 yana njiri mara Comfort Light PRO na ụdị ụdị TypeGenius, na -ekwuputa na a ga -amalite ire Kobo Stylus iche maka na ọ ga -adabara Sage a.
Dị ugbu a site na euro 289,90 na Fnac
Na -eketa imewe gara aga mana nwere a Ihuenyo 7-inch nke na-edobe pikselụ 300 n'otu inch nwere otu teknụzụ E Ink Carta 1200. Anyị nwere otu nchekwa 32GB mana onye nrụpụta 1 GHz na -akwado ya n'ihi na ọ gaghị ekwekọ na Kobo Stylus. Agbakwunyere, ee, njikọta Bluetooth nke ga -enye ohere ijikwa akwụkwọ ọdịyo, yana Nguzogide mmiri IPX8. Ngwaahịa ọhụrụ a ga -akwụ ọnụ ala karịa Sage n'agbanyeghị na -ele anya n'otu aka ahụ.
Dị ugbu a site na euro 189,90 na Fnac
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Sage na Libra 2 bụ Kobo ọhụrụ eReaders Bluetooth
Huawei Mate View, ụyọkọ nke ihe ịga nke ọma na -eme ka nrụpụta gị ka mma [nyocha]
Acer na -emezigharị oke Chromebook ma malite ngwaahịa egwuregwu ọhụrụ na #NextAtAcer